देश विकासको आधार नै यातायात हो : बद्रीप्रसाद चौलागाईं
बद्रीप्रसाद चौलागाईं, अध्यक्ष : नारायणी यातायात व्यवसायी संघ, हेटौंडा
नारायणी यातायात व्यवसायी संघ देशकै सबैभन्दा ठूलो यातायात व्यवसायीको संस्था मानिन्छ । मकवानपुरको हेटौंडामा मुख्य कार्यालय रहेको संघको नेतृत्व अहिले बद्रीप्रसाद चौलागाईंले सम्हालिरहेका छन् । संघको विभिन्न कार्यमा उनी प्रायः व्यस्त छन् । स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव पछि अब दोस्रो चरणको चुनावको तयारी भइरहेको छ । चुनावप्रति असन्तुष्टि जनाउँने पक्षले तराई क्षेत्रमा आन्दोलनको कुरा गरिरहेको छ । यस्ता बेला संघले कसरी आफ्ना व्यवसायीलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनसक्छ ? अनि पछिल्लो समय यातायात व्यवसायीको अवस्था, संघको काम कारवाही के कस्ता भइरहेका छन् भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरेका छौं ।
- यहाँ देशकै ठूलो नारायणी यातायात व्यवसायी संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पछिल्लो समय के छ कार्य गतिविधी ?
अहिले यायायात व्यवसायी र यातायात संस्थाहरुको अवस्था समग्र रुपमा हेर्ने हो भने १९ बर्ष पछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन साथै बाँकी स्थानमा हुन लागेको निर्वाचनका कारण असन्तुष्ट राजपाले केही दिनदेखि तराईक्षेत्रमा सवारी चल्न नदिने, तोडफोड गर्ने जस्ता काम गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात हामी व्यवसायीहरुले पनि राहत पाउँछौ र विकाश निमार्णको लागि देशले अग्रगति लिन्छ, हामी व्यवसायीले जनमानसमा जति सेवा सुविधा पुर्याउनु थियो त्यो बाँकी नै छ । परिस्थिति माग र आपुर्तिमा सन्तुलन नहुँदा मोटर अहिले धेरै भन्दा धेरै देशमा भित्रिएको अवस्था छ । गत भदौबाट यता हामीले दर्ता पनि बन्द गरेका छौं । तै पनि भारतबाट उत्पादित जति पनि सवारी साधनहरु केही कम्पनीहरु अहिले घरघरमा गइरहेको अवस्था छ । सोह्र मोडलका गाडीहरु ग्यारेजमा थन्केर बसेको छ । विक्री भईरहेका छैनन् । भएका सवारी पनि स्वःस्र्फुत रुपमा सन्चालन हुन सकिरहेका छैनन् ।
- अब तपाईहरुलाई के भइदिए चाहीँ राम्रो हुन्छ त ?
मैले व्यवसायीको प्रतिनिधित्वबाट भनिरहँदा देशमा शान्ति कायम रहोस्,राजनीतिक स्थिरता होस् र राजनीतिक दलहरुले एक भएर यो देश बनाउँन अघि बढुन भन्ने चाहाना छ । जसका कारण हाम्रा सवारी साधन पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जान सक्छन् । यी सवै विकासका काम भएपछि मात्र सम्भव हुन्छ । साथै त्यो संगै जोडीएका मजदुरहरुले काम पाउँछन्, स्थानीय तहमा विकास हुन्छ,साधन स्रोत हुन्छन् अनि व्यवसायी मात्र होइन सबैलाइ राम्रो हुन्छ । हाम्रो चाहाना भनेको नेपाल सरकारले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन छिटो भन्दा छिटो सकोस भन्ने हो ।
- असन्तुष्ट पक्षले गर्ने आन्दोलनका विषयमा आन्दोलनकारीहरुसंग तपाईंहरुको कुरा हुदैन ?
अहिले त्यस्तो त भएको छैन । केही दिन अघिको कुरा गर्दा पूर्व जाने शिलशिलामा केही नेताहरुसँग हामीले बुझ्दा गाडीहरु अहिले नपठाउनुहोस् हाम्रो हडताल बन्द हुन्छ, फेरी तोडफोड होला भनेर फोनबाट कुरा चाहीँ भएको थियो । त्यो भन्दैमा हाम्रो नियमित रुपमा सन्चालन भइरहेको सवारी साधन रोकेका छैनौं । शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने राज्यको काम हुन्छ । राज्यले हाम्रो लगानी संरक्षण गरोस् भन्ने चाहाना सहित हामी अगाडी बढिरहेका छौं ।
- राज्यसँग वार्ता भएको छ की छैन यस बिषयमा तपाँइहरुको ?
यो त राजनीतिक दलहरुले बुझ्नैपर्ने कुरा हो । राजपामा हुने अथवा कुनै पनि दलका व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध छन्, उहाँहरुले पनि बुझनुपर्ने हो । आज ५५ लाख पर्ने सवारी साधन बन्द छ रे भनेर घरमा राख्नुपर्दा एकध दिनको २२ सय रुपया ब्याज किस्ताको रकम तिर्नुपर्छ । त्यो घाटा त स्वयम् आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तामा पनि पर्छ हाम्रा व्यवसायी पनि कुनै न कुनै पार्टीका हुनुहुन्छ होला की भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । यो देशमा विकास निमार्णको एक मात्र आधार सवारी साधन हो त्यसैले बन्द सधैंका लागि बन्द हुनुपर्छ ।
- नारायणी यातायात व्यवसायी संघमा अहिले कति सदस्य छन् ?
संघमा तीन तीन महिनामा सदस्यताको नवीकरणको प्रकृया हुन्छ । सवारी साधन खरिद गर्ने वित्तिक्कै कुनै न कुनै संस्थामा व्यवसायीहरु सुरक्षित रहनको लागि आफ्नो पुजीको संरक्षण हुन्छ । सँस्थाले हाम्रो हितको लागि बोल्छ र हामी आबद्ध हुनुपर्छ भनेर व्यवसायीहरु आउनुहुन्छ र दर्ता गर्नुहुन्छ । दर्ता गर्ने शिलशिलामा अहिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा देशमा माग र आपुर्तिको सन्तुलन मिलेको छैन । यो देशलाइ कति सवारी साधन चाहिने यो त राज्यले निर्धारण गर्नुपर्ने हो । हामीसंग अहिले सदस्यको रुपमा १० हजारको हाराहारीमा छन् । नवीकरण भइहेको चाहीँ करीब ८ हजारको हाराहारीमा छन् ।
- तपाँइहरुले दर्ता रोक्दा त संघमा फेरी नयाँ गाडी नआउँने पूराना मात्र हुने पनि सम्भावना भयो नि हैन ?
होइन, हामीले यो पनि सुविधा दिएका छांै । एक विस्थापित एक, स्थापित नीति लिएका छौं । जसले गर्दा अहिले राज्यले ल्याएको पूराना सवारी साधनहरु कहीकतै दुर्घटना हुन्छ राज्यले कारक तत्व पत्ता लगाउँदैन । एकैचोटी संघसंस्थाले पूराना गाडी चलायो अनि लापरवाही फलानोको भयो भनेर आरोप लगाइन्छ । यस्ता आरोपलाई हामीले मध्यनजर गरेर नै हामीले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरिरहेका छौं ।
- व्यवस्थापनका लागि भनेर तपाईंहरुले धेरै कार्यक्रमहरु ल्याउनुभयो तर त्यो त्यति प्रभावकारी त देखिएन नि ?
तपाईंलाइ म एउटा उदाहरण कै रुपमा दिन्छु कुनै पनि कार्यक्रम भएको ठाउँमा अन्त्यमा हामी नास्ता खान भनेर पसल जान्छौं त्यहाँ गई सकेपछि आलोपालो गरेर बस्नुपर्छ । त्यस्तै व्यवस्थापन हो हामीले गरेको भनेको पनि । सवै व्यवसायी हाम्रा सन्तान हुन्, सबैको मुनाफा बराबरी हुनुपर्छ भन्ने उदेश्यले कार्य गरिरहेका छौं र प्रभावकारी पनि भइरहेको छ ।
- अन्त्यमा, के भन्न चाहानुहुन्छ?
अन्त्यमा स्थानीय तहको चुनावमार्फत निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल सफलताको कामना । यातायात क्षेत्रको उचित व्यस्थापन र व्यवसायीको हितमा यहाँहरुको ध्यान जाओस् । हाम्रो संघ पनि देशभरी नै यातायातको विकासका लागि निरन्तर लाग्ने छौं । मध्यस्थताले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावका बेलामा यातायात व्यवसायीको समस्या, गुनासा, कार्ययोजनाबारे अवसर दिनुभयो धन्यवाद ।
प्रस्तुती :सम्झना रिजाल/मध्यस्थता